Praiminisitra: hisokatra ny 4 mey ny trano fandraisam-bahiny sy toeram-pivarotana any Polonina
Home » Toerana fitsangatsanganana » Praiminisitra: hisokatra ny 4 mey ny trano fandraisam-bahiny sy toeram-pivarotana any Polonina
Ny praiminisitra poloney Mateusz Morawiecki
Nanambara ny praiminisitra poloney Mateusz Morawiecki androany fa hisokatra amin'ny 4 Mey ny trano fandraisam-bahiny sy ny toeram-pivarotana ao amin'ny firenena amin'ny fotoana manaraka. Hanana alalana hisokatra ny 6 mey ny préschools.
Ny toekarena lehibe indrindra ao amin'ny elatry ny Vondrona Eoropeana dia nanomboka nanalefaka ny sasany tamin'ny sisintaniny tamin'ny fiainam-bahoaka tamin'ny voalohandohan'ny volana aprily, niaraka tamin'ny firenena hafa izay te hampandeha ny indostrian'ny simba. Covid-19 areti-mifindra.
Ny dingana manaraka mba hamoahana ny toekarena, anisan'izany ny fisokafan'ireo trano fisakafoanana indray dia hambara amin'ny fotoana manaraka. Ny poloney dia mbola takiana ny hisaron-tava amin'ny besinimaro ary hakatona hatrany ny sekoly hatramin'ny 24 Mey. Tsy nanome famantarana ny governemanta rehefa mety hanokatra ny sisin-tany indray izy ireo.
Polonina, izay misy mponina 38 tapitrisa, dia nitatitra tranga 12,415 tamin'ny virus coronavirus vaovao ary 606 no maty hatramin'ny Alarobia.
Morawiecki koa dia nanamafy ny fikasan'ny governemanta hanatanteraka fifidianana filoham-pirenena araka ny fandaharam-potoana tamin'ny 10 Mey, na amin'ny fanemorana roa herinandro raha be indrindra, na eo aza ny fiantsoana avy amin'ny antoko mpanohitra sy ny hafa mba hihemotra ela kokoa.
70% ny mpikirakira fizahan-tany dia namerina nanamboatra ny diany hatramin'ny oktobra 2020 sy ny sisa